Calaamaddii Kabtanka ee uu Cristiano Ronaldo carro darteed u tuuray oo lacag waali ah lagu iibinayo & Lacagtaas oo lagu caawinayo carruurta Serbia – Gool FM
Calaamaddii Kabtanka ee uu Cristiano Ronaldo carro darteed u tuuray oo lacag waali ah lagu iibinayo & Lacagtaas oo lagu caawinayo carruurta Serbia
(Serbia) 31 Maarso 2021. Calaamaddii kabtanka ee Cristiano Ronaldo uu carro darteed dhulka ugu tuuray ayaa lacago waali ah lagu iibinayaan, waxaana lacagtaas lagu caawin doonaa carruurta xanuunsan ee dalka Serbia.
Xiddiga xulka qaranka Portugal ayaa gool sax ah laga diiday, kaasoo xulkiisa uu saddexda dhibcood ku heli karay Sabtidii, waxaana uu CR7 qarsan waayey carradiisa, isagoo garoonka isaga baxay ciyaarta oo aan weli dhammaan, isla markaana calaamaddii kabtannimo ee uu u xirnaa xulka dhulka ku tuuray.
Marada kabtanka ee xiddiga xulka Portugal uu dhulka ku tuuray ayaa la warinayaa in lagu wareejiyey hay’adda tabarucaadda dalka Serbia ee magaceeda la yiraahdo Together for Life, kuwaasoo doonaya inay lacago badan ku iibiyaan si lacagtaas ka soo baxda loogu daweeyo wiil yar oo xanuusan.
Wiil lagu magacaabo Gavril Djurdjevic oo kaliya lix sano jir ah isla arkaanka ka soo jeeda Kragujevac ayaa la doonayaa in lacagtaas lagu daweeyo, waxaana wiilkan yar uu ka xanuusanayaa lafta dhabarka.
Wiilkan yar si loo daweeyo waxa ay hay’adda tabarucaadda ee Together for Life doonaysaa inay u uruuriyaan 2.5 milyan oo euro, waxaana ay qorsheynayaan haatan in lacagtaas ay ka heli doonaan iibka calaamadda kabtanka Portugal ee Ronaldo uu dhulka ku tuuray, taasoo iibsashadeeda lagu tartami doono.
Caalamadda kabtanka ee uu garoonka ku dhex tuuray Cristiano Ronaldo waxaa garoonka ka dhex qaaday mid ka mid ah shaqaalaha garoonka, waxaana uu ugu deeqay hay’adda Together for Life & wiilka yar ee Gavril.
Si kastaba ha noqotee, xanaaqii Ronaldo ayaa noqon kara mid lagu faa’iido, welibana ay faafadada ugu badan ka helaan xulkii ka xanaajiyey CR7 ee Serbia, inkastoo uu sax ahaa goolkii laga diiday.
Kulankii Ivory Coast iyo Ethiopia oo mashaqo ka dhacday, Garsoore istaagga ka dhacay, mid Korona Fayras ku dhacay & Calanhaye isku bedelay garsoore dhexe